Bogga ugu weyn Sida Loo Bilaabo Ganacsiga Gaadiidleyda 2022 | Hagaha Buuxa
Maaddaama ganacsiyada internetka ay noqdaan kuwo caan ah, baahida ganacsiyada xawilaadaha ayaa sii kordhaya baahida. Baaxadda suuqa iyo dakhliga Warshadaynta & Warshadaha Adeegyada Bixinta Maxaliga ah ee Maraykanka ayaa lagu cabbiray $ 126.2bn sanadka 2021. Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad ka fekereyso inaad bilowdo ganacsi, ganacsiga warqaaduhu waa hubaal ikhtiyaar wanaagsan.
Si kastaba ha ahaatee, gudaha jawiga halganka loogu jiro helitaanka gaadiid tayo leh, rag la isku halayn karo, iyo maarayn waqti ku ool ah, ganacsiyada wax diritu waxa ay noqon karaan kuwo aad u adag in la bilaabo.
Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa sidii aad u bilaabi lahayd una socodsiin lahayd ganacsi gudbin ah oo guulaystay.
Waa maxay ganacsiga wax-soo-saarka?
Ganacsiga wax-soo-qaadista waxay ku lug leedahay gaarsiinta baakadaha hal meel ilaa meel kale. Waxa ka sooca adeega dirista iyo adeega boostada waa xawaarihiisa, si habsami leh u gaadhsiintiisa, ammaankiisa, shakhsiyaynta adeegyada, amniga, dabagalka, iyo takhasuska.
Meheradaha wax-soo-dejinta waxay ku shaqeeyaan heerar kala duwan adeegyada gaarsiinta maxalliga ah sida kuwa baaskiilka-qaadayaasha, rarida mootooyinka, kuwa xamuulka qaada, kuwa xamuulka qaada oo taga adeegyada caalamiga ah sida DHL, FedEx, UPS, iyo USA Couriers.
Meheradaha wax dirsada ma yihiin kuwo faa'iido leh?
Guud ahaan ma aad bilaabin ganacsi diris “wanaagga bulshada”, waxaad doonaysaa inay noqoto mid faa'iido leh. Waad ku mahadsan tahay kororka shaqooyinka fogfog, adeegyada gudbintu waxay noqonayaan mid sare oo baahida loo qabo. Celceliska heerka qaran ee adeegyada gudbinta ee isticmaalaya gaadhi “iftiin” ah, sida baabuur, xamuulka qaada ama yar yar ayaa ku dhow. $ 36 saacaddiiba. Haddii aad shaqeyso 8 saacadood maalintii, taasi waa $1440 todobaadkii iyo $72,000 sanadkii.
Sideed lacag uga samaysataa ganacsiga xambaara?
Qaabka ganacsiga aasaasiga ah ee ganacsiga warqaaduhu waa in la helo lacag shay kasta oo la keeno. Habka ugu wanaagsan ee lacag lagu sameeyo waa in la helo ganacsiyo lagu saxiixo adeegga xawilaadahaaga. Sidan ayay kula soo xidhiidhaan wakhti kasta oo ay u baahan yihiin in alaabta la keeno.
Qalab noocee ah ayaad u baahan tahay si aad u bilawdo Ganacsiga Courier?
Si aad u bilawdo ganacsi diris guul leh, waxa jira qaybo qalab ah oo ay tahay inaad haysato.
Si aad u bilowdo ganacsi xirfadeed, waxaad u baahan doontaa gaadiid la isku halayn karo si aad alaabta uga guurto meel aad meel kale uga guurto. Haddii aad qorsheyneyso inaad rarto alaab waaweyn iyo kuwa culus, waxaad u baahan doontaa van ama gaari xamuul ah laakiin haddii aad qaadayso alaabo yar-yar oo shakhsi ah waxaad u baahan doontaa baaskiil xamuul, saddex baaskiil, ama baabuur.
Taleefanka casriga ahi aad buu muhiim ugu yahay socodsiinta ganacsiga wax-qaadista. Waxaad u baahan tahay si aad u wacdo macaamiishaada iyo sidoo kale aad isticmaasho GPS si aad u hesho. Maadaama dadka intooda badani ay haystaan ​​taleefoonnada casriga ah maalmahan, tani runtii dhib weyn maaha.
Haddii aad u bilaabayso ganacsi yar-yar, waxaad u baahan doontaa sanduuqa dirida si aad u hubiso in alaabtaadu ay badbaado yihiin. Baaxadda sanduuqa diritaanka way kala duwan tahay nooca alaabta aad keenayso. Wax kasta oo u dhexeeya 10kg iyo 25kg waa inay si fiican ugu shaqeeyaan ganacsiyada yaryar ee rarida.
Gawaadhida jawaanka/Gawaarida alaabta guriga
Si aad u soo daabusho tiro badan, waxa aad u baahan doontaa baabuur jawaan ah ama trolley alaabta guriga ah si ay kaaga caawiso in aad alaabta uga guurto gaadhiga halka aad geynayso.
Xargaha Ratchet ama Xadhkaha Bungee
Markaad alaab raridayso waxaad rabtaa inaad hubiso in alaabtu sugan yihiin. Bal qiyaas in aad keenayso tiro badan oo muraayado ah, ma doonaysid in ay simbiriirixanayaan ama jabayaan. Xadhkaha ratchetka ama xadhkaha bungee ayaa faa'iido leh si loo hubiyo in alaabtu ay sugan yihiin inta lagu jiro safarka.
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Gaadhsiiye Guulaysan
Si aad u bilawdo ganacsi-qaade guul leh waxa jira talaabooyin fudud oo ay tahay inaad raacdo.
Hel maalgelin oo diiwaan geli ganacsigaaga
Haddi aad haysato gaadhi lagu kalsoonaan karo iyo talefanka gacanta, waxa aad ku bilaabi kartaa meherad warqaad ah oo ka yar $900. Haddii aad u baahan tahay inaad baabuur hesho, waxaad deyn ka heli kartaa bangi, hay'ad wax amaahinaysa, ama qoyska iyo asxaabta.
Ka dib markaad hesho maalgelin, waxaad u baahan doontaa inaad doorato magac ganacsi oo aad diiwaan geliso ganacsigaaga. Hubi Nolo macluumaadka khabiirka ah ee nooca qaab-dhismeedka sharciga ah waa inaad u qabataa ganacsigaaga xawilaadaha.
Soo hel niche
Haddii aad ku nooshahay magaalo weyn oo leh ganacsiyo badan oo rarida, qaadashada meel gaar ah waa hab wax ku ool ah oo lagu bilaabo. Waxay kaa caawin lahayd inaad hesho macaamiil oo aad daboosho baahiyahooda gaarka ah. Tusaale ahaan, DoorDash waxay diiradda saartaa gaarsiinta cuntada waxayna leedahay saldhigga macaamiisha 20 million.
Bilaabidda nooc kasta oo ganacsi, qorshe ganacsi oo wanaagsan ayaa aad muhiim u ah. Waa inaad dejiso qorshe oo aad dejiso yoolal la gaari karo. Si tan loo sameeyo, waxaad kireysan kartaa la-taliye ganacsi si aad u hesho talo khabiir ama waxaad su'aalo ka waydiin kartaa dadka ku jira niche si aad u dejiso qorshe ganacsi oo qumman oo daboolaya baahiyaha ganacsigaaga.
Ganacsigaaga dhig Qorshaha Caymiska
Meheradda warqaaduhu waxay u baahan doontaa caymis baabuurta, xamuulka haddii ay shilal dhacaan.
Si aad u hesho caymis meheraddaada xawilaadaha, la xidhiidh dilaal ganacsi oo deegaanka ah si aad u ogaato qorshaha kuu shaqaynaya iyadoo lagu salaynayo qalabkaaga, keenistaada, iyo khatarta aad dareemayso.
Kadib markaad dejiso meheraddaada xawilaadaha oo aad diiwaan geliso, talaabada xigta ee muhiimka ah waa inaad hesho macaamiisha. Waxaad la bilaabi kartaa qoyska iyo saaxiibada dhow kuwaas oo sidoo kale u gudbin kara dadka kale ganacsigaaga. Si kastaba ha ahaatee, si aad u yeelato macaamiil weyn, waa inaad dejisaa qorshe suuqgeyneed oo adag.
Si tan loo sameeyo, waa inaad samaysaa joogitaanka khadka tooska ah adiga oo abuuraya degel, xisaabaadka warbaahinta bulshada, wargeysyada iimaylka, abka gudbinta ee gaarka ah kaas oo siin doona muuqaalka ganacsigaaga oo awood u siinaya macaamiisha inay wicitaanada sameeyaan.
Hel Booska Kaydka
Si aad u socodsiiso meherad warqaadayaal ah waxaad u baahan doontaa meel wax lagu kaydiyo si aad u kaydiso alaabtaada. Waxa aad tan ku samayn kartaa adiga oo kiraysanaya bakhaar ama meel gaar ah aad ku hagaajinayso guri kayd ah. Waxa ugu muhiimsan waa in la hubiyo in goobta ay sugan tahay si looga fogaado luminta alaabta macaamiisha.
Maalgelinta shaqaaleysiinta dadka saxda ah
Shaqaalaynta shaqaale sax ah ayaa aad muhiim ugu ah socodsiinta ganacsi kasta. Maalgeli shaqaaleysiinta dadka saxda ah ee leh xirfadaha, kartida, iyo khibradda ku habboon, kuwaas oo fahma waxa ay ka dhigan tahay in macaamiisha la hor mariyo. Markaad haysato shaqaale lagu kalsoonaan karo, waxay abuurtaa kalsoonida macaamiisha waxayna caawisaa kobcinta ganacsigaaga.
Si sax ah u maamul wakhtigaaga
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee adeegyada xawilaadaha ayaa ah gaarsiinta degdegga ah. Sidaa darteed, waa inaad barataa sida wakhtigaaga si habboon loogu maareeyo si aad macaamiishu uga dhigto inay soo noqdaan. Si taas loo gaaro waa inaad samaysaa jadwal shaqaynaya oo aad geliso gaadiid la isku halayn karo. Ford Transit Connect waa gaari xamuul oo wanaagsan oo loogu talagalay adeegyada gudbinta wuxuuna ku kacayaa ilaa $24,655.
Qeex astaanta ganacsigaaga
Ka raadi waxa u dejinaya qorshahaaga ganacsi ee u gudbinta dadka kale ee agagaarkaaga oo ku dhis. Tusaale ahaan, ShipBob waxaa lagu taxay mid ka mid ah adeegyada xawilaadaha ugu wanaagsan ee ganacsiyada yaryar sababta oo ah qiimaheeda hufan iyo ku biirinteeda meheradaha E-commerce sida Walmart, eBay, Shopify, WooCommerce, Squarespace, Wix, iyo in ka badan.
Bixi adeeg gaar ah
War maaha in adeegga macaamiisha wanaagsani uu aad muhiim ugu yahay in la joogteeyo ganacsi kasta. Bal qiyaas inaad hamburger ka soo qaadanayso makhaayad cunto degdeg ah ka dib maalin dheer oo keliya in gabadha miiska joogta ay si xun kuugula hadasho.
Waxaa jirta suurtogalnimo sare oo aadan ku laaban doonin halkaas oo aad doorbidi lahayd inaad raadiso makhaayad kale oo kuu dhow. Tani waxay sidoo kale khusaysaa ganacsigaaga warqaadayaasha. Marka shaqaalahaagu si wanaagsan ula dhaqmaan macaamiishaada macaamiishaadu way sii kordhin lahaayeen.
La soco ganacsigaaga
Milkiilayaasha meheradaha cusub sida caadiga ah waxay la kulmaan kharashaadkooda waxayna bilaabaan inay la kulmaan dhibaatooyin socodka lacagta caddaanka ah. Si taas looga fogaado, waxaad u baahan doontaa inaad abuurto bayaannada xisaabaadka si aad ula socoto wax kala iibsigaaga. Waxaad shaqaaleysiin kartaa xirfadlayaal si ay tan u sameeyaan ama u isticmaal software xisaabinta sida Buug -yaraha si aad ula socoto dhaqdhaqaaqaaga iyo kaydinta buugaagtaada.
Marka la soo koobo, meheradda warqaaduhu waa ganacsi aad u wanaagsan sababta oo ah shaqooyinka fog-fog oo noqday kuwa cusub. In kasta oo bilawga ganacsiga warqaaduhu ay mararka qaarkood muujin karto mid adag sida ganacsi kasta oo kale.
Haddii aad raacdo tillaabooyinka saxda ah, waxaad u socotaa inaad yeelato ganacsi diris ah oo guuleysta kaasoo faa'iido keeni kara maalin kasta.
Tasmin Lofthouse. Qalabkee ayaan u baahanahay si aan u bilaabo ganacsiga rarida? Couriers.TV
Gabrielle Pickard-Whitehead. 20 dhibcood liiska hubinta si aad u bilowdo meherad warqaadayaal ah. Smallbiztrends.com
William Barton. Lacag ma ka samayn kartaa adiga oo diraya? pioneerbd.com
50ka Ganacsi ee Maalgashiga Yaryar ee ugu Sareeya
25+ ganacsiyada yaryar ee ugu faa'iidada badan
Waa maxay Qiimaha Warqadda FedEx ee Habeenkii iyo dhoofinta kale
Sida Ganacsi Looga Bilaabo North Carolina
Ganacsiga Ka Saarista Qashinka Xayawaanka ee 2022: Sirta ku saabsan sida loo bilaabo Sameynta $ 75/saac
Yaa u maleeyay in ganacsiga qashin-qubka xayawaanku uu faa'iido u yeelan karo ganacsadaha?! Hagaag, laga yaabee inaysan ahayn hadalkaaga…